Jereo ny fomba hananana zaridaina ekolojika tsara tarehy ao an-tranonao | Bezzia
Ahoana ny fananana zaridaina ekolojika
Susana Garcia | | an-trano
Ny fananana zaridaina ao an-trano dia lafo vidy, fa raha irintsika ho toerana voajanahary tokoa izany dia zava-dehibe izany andao hifantoka amin'ny zaridaina ekolojikana. Ny fahalalana ny zaridaina ekolojika dia zava-dehibe, satria ho fantatsika raha mety amintsika io sy ny tombony azo entina eo amin'ny fiainantsika sy ny tontolo iainantsika. Ilaina ihany koa ny mahafantatra izay loharano hampiasaina hanana zaridaina ekolojika.
Azontsika atao ny mieritreritra fa ny zaridaina, satria sehatra voajanahary ao an-tranontsika, noho izany dia ekolojika, saingy tsy tokony ho toy izany. Misy zavatra maro izay mahatonga azy io ho tontolo iainana misimisy kokoa momba ny tontolo iainana ary raha io no fomba fiainantsika dia maniry hanana zaridaina ekolojika tsara isika.
1 Inona no atao hoe zaridaina ekolojika
2 Volavola zaridaina
3 Ny ahitra
4 Mikolokolo ny tany
Inona no atao hoe zaridaina ekolojika
Ny zavatra voalohany tokony hazava amintsika dia ny zaridaina ekolojika iray izay mampiasa ny ankamaroan'ny harena voajanahary misy Ary izany no mahatonga azy mandray anjara amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana fa tsy manimba azy. Matetika isika dia mampiasa fanafody famonoana bibikely, vokatra simika na sanganasa artifisialy be loatra mba hamoronana zaridaina tsara tarehy izay, na izany aza, tsy ekolojika intsony. Ankoatr'izay, ny fampiasana vita amin'ny rano dia tena zava-dehibe, satria ilaina amin'ny zaridaina voajanahary voakarakara tsara izany nefa tsy tokony ho very maina noho izany antony izany. Ireo antsipiriany rehetra ireo no mahatonga ny zaridaina ho maitso.
Ny zavatra voalohany tokony hatao raiso ny karazana tany ao amin'ny zaridainantsika. Raha zaridaina afaka manararaotra ny loharanon-drano izy, raha manana fitambarana tsara hambolena zavamaniry ao na karazana otrikaina ananany, hahafantarana raha mila manampy zezika tsara amin'ny zava-drehetra hanatsarana ny kalitaon'ny ny tany. Ny manam-pahaizana iray dia afaka mitarika antsika raha ny amin'ny fitrandrahana ny ankamaroan'ny tany ananantsika mba ahafahan'ny natiora maniry ao aminy amin'ny fomba ekolojika.
Etsy ankilany, zava-dehibe ny fisafidianana tsara ireo karazana zavamaniry izay hataontsika. dia tsara ny misafidy zavamaniry tompon-tany satria hahay hifanaraka tsara kokoa amin'ny toetrandro izy ireo manjaka ary tsy mila manana loharano be loatra isika hitazonana azy ireo amin'ny toe-javatra tsara. Ohatra tsara dia toerana tsy be orana ary mafana ny toetrandro. Raha misafidy zavamaniry amin'ny faritra mando na karazana tropikaly isika, dia tsy maintsy handany rano be dia be, hampihena ny loharanon-karena ilaina hitazonana karazana zavamaniry izay tsy vazimba. Ilaina ihany koa ny karazany, satria alohan'ny bibikely dia ho rakotra kokoa isika, satria vitsy ny zavamaniry ho simba.
Na dia marina aza fa maniry ahitra tsara tarehy sy voahaja tsara ao anaty zaridaina ny tsirairay, angamba raha maniry zaridaina ekolojika isika mila mahafoy an'ity karazana loharanom-pahalalana ity isika. Miasa tsara ho an'ny zaridaina maoderina ny bozaka, saingy mila rano be dia be hikolokoloana sy hanalana rano amin'ny zavamaniry hafa, ka mety hanimba azy ireo ihany koa. Ny zaridainan'ny tontolo iainana dia tsy ho lavorary mihitsy, fa azo antoka fa fanomezana ho an'ny natiora.
Mikolokolo ny tany
Aza mampiasa zezika simika sy fanafody famonoana bibikely ho an'ny zava-maniry. Zava-dehibe ny fahazoana zezika izay voajanahary. Androany dia olona maro ampiasao ny zezika an-trano miaraka amin'ny sakafo sy ny sisa tavela izay ampiasaina amin'ity karazana zezika ity. Izy io dia azo tehirizina ao anaty fitoeram-bokatra ary ampiasaina rehefa ilaina. Zezika voajanahary izy io ary amin'izany fomba izany no hanaovantsika antoka fa tsy handoto ny tany isika, satria voasivana ireo akora simika ireo ary afaka miditra ao anaty rano sy renirano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ahoana ny fananana zaridaina ekolojika
Hainao ve ny mahazo endrika nefa tsy mijaly?
Andian-teny 5 tokony holazainao amin'ny zanakao